Niknayman: နအဖနဲ့အပေါင်းအပါတို့ ရဲ့လုပ်ရပ်များအား ဖေါ်ထုတ်ပြောဆိုကြခြင်း။
နအဖနဲ့အပေါင်းအပါတို့ ရဲ့လုပ်ရပ်များအား ဖေါ်ထုတ်ပြောဆိုကြခြင်း။
ဖျာပုံ မှာ နိုင်ငံခြားက လာတဲ. ကယ်ဆယ်ရေးတဲ ကို ဒုက္ခသည်တွေ နေလို.မရပါဘူး၊ စစ်သားတွေနေတယ်၊ စစ်သားရဲ. မိန်းမတွေနေပါတယ်၊ အဲဒီမိန်းမတွေ တဲကိုလာနေတဲ.အတွက် တစ်နေ.ကို ၂၀၀၀ ရပါတယ်၊
အစားအသောက်တွေဝေပြီးတဲ.အချိန် လက်နက်ကိုင်တွေရောက်လာတော. ဒုက္ခသည်တွေ ထွက်ပြေးကြတယ်၊ ဘာကြောင်.လဲမေးကြည်.တော. အဲဒီလက်နက်ကိုင်တွေက အစားအသောက်တွေကို ပြန်သိမ်းတယ်တဲ. ၊ မပေးရင် ထောင် ၁၀ ရက်ချတယ်ဆိုပဲ။
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးမှာသုံးဖို. လန်ခရူဇာတွေကို ကြက်ခြေနီကို လှူပါတယ်၊ ကြက်ခြေနီရုံးရှေ.မှာ ခဏလောက်လာရပ်ထားပြီး မတွေ.တော.ဘူးဆိုပဲ။
ကာစတန်က အရာရှိက လာသမျှထဲမှာ ရွက်ဖျင်တဲတွေ အများဆုံးလို.ပြောပါတယ်၊ အဲဒါတွေ နဲနဲလောက်ပဲ အပြင်မှာတွေ.ရတယ်။
ထမင်းထုပ်ရပေမယ်. မစားကြရသေးပါဘူး၊ လူကြီးမလာမချင်းစောင်.ကြရသေးပါတယ်။
ရွာတွေကိုသွားမေးပါ၊ ၃ -၄ ရက်လောက်နေမှ ဆန်တစ်ပြည်လောက်ပဲရတယ်တဲ.။
လူကြီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ.ရွာတွေကိုပဲ ရှိုးပြပြီးလုပ်ကြပါတယ်၊ အထဲကို စက်လှေတွေနဲ.သွားရတဲ.နေရာတွေကို ဘယ်လူမှ လှည်.မကြည်.ကြပါ။
ဘိုကလေးနယ်မှာ အမဲရောင်နယ်မြေဆိုတာရှိပါတယ်၊ မလုံခြုံဘူးဆိုပြီး ဘယ်သူမှ ပေးမသွားပါ၊ အဲဒီရွာတွေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ်ထားပါတယ်၊ ကရင်ရွာတွေပ။ါ
ဝေလုကျော်ကို မြောင်းမြ ကြံ.ဖွတ်တွေ ၀ိုင်းရိုက်တယ်ကြားတယ်။
လူကြီးတွေနဲ.နီးစပ်သူများ ဘယ်လူကြီးအိမ်မှာ ဘယ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ တွေ.တယ်ဆိုတာ ရေးတင်ကြရင်ကောင်းမယ်။
ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကို ကုမ္ပဏီတွေကို တာဝန်ပေးတော. ရွှေသံလွင်ကျော်ဝင်းက အရင်းပြန်မရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီး ကန်.ကွက်သတဲ.။
မနေ့ကလေဘေးသင့်ဒေသတွေကို ပို့ဖို့ ကျွဲတွေကို စစ်ကားပေါ်မှာတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ အကောင်ရေ (၃၀) လောက်ပဲရှိမယ်။ဘယ်လိုဝေပေးလဲ မသိဘူး။
Posted by Niknayman at 4:40 PM